Indawo yesivakashi esizimele ihora elilodwa ukusuka e-Crater Lake. - I-Airbnb
Indawo yesivakashi esizimele ihora elilodwa ukusuka e-Crater Lake.
Le suite yezivakashi ebanzi, esemaphandleni, neyimfihlo ngaphezu kwegalaji yethu inendawo yawo wonke umndeni futhi iyindawo engaphansi kwehora ngemoto usuka e-Crater Lake National Park! I-suite inomnyango wayo wokungena ngegaraji lethu (lapho ungagcina khona amabhayisikili akho ngokuphephile!) futhi ihlukaniswe nendlu yethu yonke ngomnyango oqinile okhiyiwe nhlangothi zombili. Inemibhede emithathu, ikhishi, igumbi lokugezela neshawa ebanzi, i-4k TV ene-Netflix ne-Disney+, futhi ihlotshiswe ngezithombe zami zasendaweni.
Ukufakwa kuhlu kwethu kuhlanganisa indawo yokulala neyokuhlala engamamitha-skwele angama-400, ikhishi elihlomele kahle, kanye negumbi lokugezela elineshawa enkulu. Ihlukaniswe nendlu yethu yonke ngomnyango wangaphandle owugqinsi okhiyiwe nhlangothi zombili. I-dead-bolt ohlangothini lwakho ayikhiyiwe futhi ingavulwa kuphela ngaphakathi kweyunithi. Lapho ungena ngomnyango onokhiye wedijithali egalaji lethu, uzozithola usephasishi elikhanyiswe kahle elihlukaniswe nalo lonke elasegaraji lethu. Lesi kuzoba ukuphela kwendawo okwabelwana ngayo ngesikhathi sokuhlala kwakho, futhi iyindawo enhle kakhulu nevikelekile yokugcina amabhayisikili nanoma yimuphi omunye umthwalo ongafuni ukuwuyisa phezulu endlini yezivakashi.
Ekupheleni kwaleli phasiji kunesitezi esifushane esikuyisa ekhishi kanye nendawo yokugezela. I-suite iyipulani yezinga elihlukanisiwe, ngakho-ke ukusuka lapho, enye isigamu sezinyathelo zokundiza ikuyisa phezulu ikuyise endaweni engamamitha-skwele angama-400 yokulala nokuhlala. Noma njengoba ngithanda ukucabanga ngakho kunikezwe ukuhlobisa kwe-rustic, "indlu engaphansi." Lapha sinemibhede emithathu (amawele amabili nelilodwa eligcwele), i-43" 4K TV ene-Netflix ne-Disney+, ideski lomsebenzi, itafula lokudlela elinezihlalo ezi-4, ikhabethe elikhulu lokungena, kanye nenani lamaphrinti ezithombe zami. umsebenzi obonisa izinto ze-Oregonian kakhulu njenge-Crater Lake, amahhashi asendle, izinqola ezimboziwe, nesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi! Amaphrinti ami ayathengiswa futhi enza izikhumbuzo ezinhle kakhulu zesikhathi sakho e-Oregon.
Isaziso esiya kubavakashi bethu abade kakhulu:
Uphahla endaweni yokulala neyokuhlala lungaphezudlwana kuka-81", noma lucishe lube ngu-6' 10". Ngakho-ke sicela uqaphele futhi ubheke ikhanda lakho uma umude kakhulu. Ngingaphezudlwana kuka-6' ubude futhi ngikwazi ukuhamba kalula ngaphansi kokukhanya okungaphezulu ngisho ngigqoke amabhuzu, kodwa kuyinto okufanele uyiqaphele. Ingxenye yegumbi emibhede ekuyo ifaka umthambeka wophahla ukuze uzizwe u-rustic futhi ufana nekhabhini, ngakho-ke sicela ubuke ikhanda lakho njengoba ungena futhi uphuma embhedeni!
4.76 · 238 okushiwo abanye
Sihlala eduze nesiqongo segquma futhi sinombono omuhle, ongenazithiyo wezintaba ezisempumalanga. Ngenxa yokuma kwendawo esihlala kuyo, ikhaya lethu yilona kuphela elingena emgwaqeni endaweni yethu encane. Ngenxa yalokhu, kune-traffic encane kakhulu futhi cishe akunamkhawulo wokupaka emgwaqweni phambi kwendlu yethu. Ukuthutha isikebhe? Ukuhamba ngezimoto eziningi? Azikho izinkinga! Sinendawo yokupaka emgwaqeni eyanele inqwaba yezimoto futhi ayikaze, ithathwe.
Nakuba uzokwazi ukungena futhi ungene futhi uhambe ngokuthanda kwakho ngaphandle kokuxhumana nathi, mina nomkami sizobe siseduze kakhulu, ngakho-ke uma kukhona okudingayo kufanele ukwazi ukubamba omunye wethu. . Ngisebenzela ekhaya futhi nehhovisi lami lisegaraji lami, ngakho-ke zizwe ukhululekile ukungqongqoza noma nini uma udinga okuthile. Uma ngikhona, ngizophendula.
Nakuba uzokwazi ukungena futhi ungene futhi uhambe ngokuthanda kwakho ngaphandle kokuxhumana nathi, mina nomkami sizobe siseduze kakhulu, ngakho-ke uma kukhona okudingayo kufanele…